Umthandazo onamandla wokucocwa kunye nokukhuselwa ngokomoya. ?
Umthandazo onamandla wokucoceka ngokomoya kunye nokukhusela. Inamandla okhuselo, ukunyusa frequency, ukuphilisa kunye nokucoca ngokomoya, i Umthandazo wokucoca kwiintsuku ezingama-21 waye-psychographed ngumntu ophakathi waseMelika uGreg Mize kwii-1990s, kwaye waduma kuwo wonke umhlaba el mundo.
Ukucocwa kweentsuku ezingama-21 kuqinisekisa ukucocwa kwayo yonke imiqobo eyaziwayo okanye engaziwayo, izixhobo zokomoya, iiparitha zengqondo kunye nomzimba ovakalelo, kunye neendlela zokucinga, kubandakanya iziqalekiso, ukuvumisa, iziqhulo kunye nezifungo, izifungo kunye nokuzibophelela okunokuthi Gcina ezi zixhobo. asebenzayo ngamnye kuthi.
Ezi meko zokuma kunye neepateni zichazwa njengezifakelo okanye izixhobo, zendele kwi-subconscious yethu. Ukuqaliswa kwayo kuya kuthatha ubomi kwinqanaba elitsha lokucacisa kunye nenjongo.
Njengoko kudlula iintsuku ezingama-21, amanqanaba ahlukeneyo ekarma akhutshwa ngaxeshanye. Ngayo iindlela ezintsha ziya kuvulwa kwaye ubomi bube nentsingiselo entsha.
1 Umthandazo onamandla wokucoceka ngokomoya kunye nokukhusela
1.1 Ungacoca njani ngeentsuku ezingama-21
1.2 Kutheni iintsuku ezingama-21?
1.3 Iintsuku ezingama-21 zokucoca kunye neNgelosi enkulu uMichael
1.4 Unokuziva njani ngokucocwa kweentsuku ezingama-21?
1.5 Umthandazo weentsuku ezingama-21 zokucoca
Ungacoca njani ngeentsuku ezingama-21
Isincomo kukuba ukucocwa kweentsuku ezingama-21 kufundwe ngokuvakalayo kangangeentsuku ezingama-21 ngokulandelelana ngexesha elililo kulowo ngamnye, ngokuxhomekeka ekubeni akukho kuphazamiseka.
Kutheni iintsuku ezingama-21?
Akukho ngengozi ukuba esi sigwebo sibizwa ngokuba licocekileyo leentsuku ezingama-21. Ngalo lonke ixesha xa siphendukela kumandla rhoqo ngenjongo yokucoca okanye ukucoca, zonke i-chakras emzimbeni wethu ziyahamba ngale nkqubo. I-chakra nganye ifuna iintsuku ezintathu ukuze isebenze. Lilonke, sine-7rashes eziphambili, iintsuku ezintathu nganye, zizonke ezingama-21.
Nangona kunjalo, le nkqubo yinto ezenzekelayo, okuthetha ukuba asinakulawula. Amandla ahlala eqalisa ukusebenza ukusuka kwisidenser kunye ne-chakra eqinileyo ngakumbi eyaziwa ngokuba sisisiseko okanye ingcwele, kwaye oku kubuyelela kwi-coralary okanye kwi-chakra ye-coronary, okusimanyanisa namandla acocekileyo ngokomoya.
Ukubaluleka kweentsuku ezingama-21 sele kuqinisekisiwe ngophando lwenzululwazi. Ukuphindaphindwa kwezenzo kunye neengcinga kudala uhlobo lwamanqaku kwinkqubo yeemvakalelo, ebangela ii-neurons ezinoxanduva lokukhutshwa kolwazi ukuphendula ukuphindaphinda kwezi zinto zishukumisayo. Oko kukuthi, ulwazi olutsha luvelisa inkuthazo entsha.
Ngokucoca iintsuku ezingama-21, zonke iiseli ziphinde zahlengahlengiswa, hayi ezo zenkqubo-luvo kuphela. Ukuqinisekisa ubomi obulunge ngakumbi kunye nokusebenza ngokuhambelana komzimba, ingqondo kunye nomoya.
Iintsuku ezingama-21 zokucoca kunye neNgelosi enkulu uMichael
Kwingelosi ezisixhenxe ezinamandla, abathunywa bakaThixo, iNgilosi enkulu uMikayeli, INkosi yeeNgelosi, aziwa kakhulu. Yingelosi enkulu yokholo, ukhuseleko kunye nokuhlangulwa ebubini. Ke ngoko, kwi Umthandazo wokucoca kwiintsuku ezingama-21 Izibongozo zibhekiswa kuye.
Ingilosi enkulu ye-ray yokuqala kaThixo, i-ray yokhuseleko, ukugqibelela kunye nentando kaThixo, kwisikhundla sasezulwini esikhokelela kwimikhosi yokuKhanya ngokuchasene nemimoya yemvukelo.
Ngeenwele zegolide kunye namehlo aluhlaza, iNkosana uMichael, njengoko ebizwa njalo, uva izicelo zabantu kunye neentlungu zomphefumlo. Xa abantu bokuqala beza emhlabeni ukuza kuzalisa, wayengumlondolozi. Ukususela ngoko, kunye neLegion yakhe, uqhubekile nokukhusela ubuntu.
Ngokubhenela ngesazela kwiNgilosi enkulu uMichael kunye neLegion yakhe, esi sicelo siphendulwa ngokukhawuleza. Ukuze oku kwenzeke, ngaphaya kokubhenela ekuqondeni, ukunyaniseka nokunyaniseka kuyimfuneko, ngesiqu sakho kunye neenqobo zabantu.
Unokuziva njani ngokucocwa kweentsuku ezingama-21?
Kwiiveki ezimbini zokuqala, nikela ingqalelo ekhethekileyo kumaphupha, ingaqhelekanga. Eli lixesha apho amandla aya kuthi asebenze ngokunzulu, ke ngoko abanye banokuba neempawu zobusuku obunye njengoko amandla e-denser acocwa.
Emva kweli xesha kwaye phantse ekupheleni komjikelo, uya kuba nakho ukubona iimvakalelo ezinjengokuzola nokucacisa, okunikezwe kukucoca kweentsuku ezingama-21. Ekugqibeleni, emva kokuphela kwako konke ukubandezeleka, kuya kutyhilwa injongo kunye nentsingiselo ebomini.
Yazi Umthandazo kwiintsuku ezingama-21 zokucoca ngezantsi kwaye ulungele ubomi obuvuselelweyo!
Umthandazo weentsuku ezingama-21 zokucoca
"Mna, ukwaziwa (igama lakho elipheleleyo) kule kokufa ethile, yile nguqulelo iindlela kunye alahle ngamnye omnye izibophelelo ukunyaniseka, isivumelwano okuvota kunye / okanye imvumelwano ubumbano ayisebenzi kwakhona ukulunga kwam. iphakanyiswe kobu bomi, ubomi bangaphambili, ubomi obumanyanye, kuyo yonke imilinganiselo, amaxesha amaxesha neendawo.
Ngoku ukuba wonke amaqumrhu (abo ezinxulumene zezi izivumelwano, imibutho kunye nemibutho ukuba ngoku balahle) ukuba bayeke nikuyeke azinikele intsimi amandla yam ngoku nangonaphakade kwaye retroactively, ukuthatha zakudala zazo, izixhobo kunye namandla. kuhlwayelwe
Ukuqinisekisa oku, ngoku ndicela umoya oyi-Shekinah ukuba unike ubungqina bokupheliswa kwazo zonke izivumelwano, izixhobo kunye namandla ahlwayelweyo ahlazisa uThixo. Oku kubandakanya yonke iminqophiso kunye nezidalwa ezingamhloniphiyo uThixo njengOyena Uphakamileyo.
Ukongeza, ndiyalela uMoya oyiNgcwele ukuba "ungqinele" oku kukhululwa okugqibeleleyo kuko konke okuchasene nentando kaThixo. Ndiyakubhengeza oku phambili kwaye ndisebenza ngokuzimela. Kwaye makube njalo.
Ngoku ndiwukhusela kwakhona umnqophiso wam noThixo ngamandla egunya likaKristu kwaye ndinikezela ubomi bam bonke, umzimba wam, engqondweni, ngokwasemphefumlweni nangokomoya ukuba mandundu kuKristu ukususela kulo mzuzu ukuya phambili nasekubuyeni kwakhona. Ukongeza, ndinikezela ngobomi bam, umsebenzi wam, yonke into endiycingayo, ndiyithethayo kwaye ndiyenza, nazo zonke izinto ezikwindawo endihlala ndiyikhonza, ukuya kugungqa likaKristu.
Ukongeza, ndinikezela ubukho bam kwisizinda sam nakwindlela yokunyuka, kumhlaba nakowam.
Xa ndiyixelile yonke le nto, ngoku ndigunyazisa uKrestu kunye nesiqu sam esiPhakamileyo ukuba ndenze utshintsho ebomini bam ukuze ndikwazi ukufumana lo mnikelo mtsha kwaye ndiyalele noMoya oyiNgcwele ukuba nawo ungangqina oku. Ngoku ke ndixela le nto kuThixo. Mayibhalwe encwadini yobomi. Ke makube njalo.
Kwindalo yonke nakwingqondo iphela kaThixo nakuzo zonke izinto eziphila kuye, nokuba kuphi, apho abekhona Phakathi kwethu, ngoku siphilise uxolelo. Ngoku ndicela uMoya oyiNgcwele Shekinah, Lord Metatron, Lord Maitreya kunye neJamani eyiGreater ukuba ancede anike ubungqina bokuphiliswa.
Ndikuxolele ngayo yonke into ekufuneka uxolele phakathi kwam nawe. Ndicela undixelele ngayo yonke into edinga ukuxolelwa phakathi kwakho nam. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ndiyazixolela ngayo yonke into efuna ukuxolelwa phakathi kokudalwa komzimba wam kunye nokuziphatha kwam okuphezulu.
Ngoku siphiliswa ngokudibeneyo kwaye sixolelwe, siphilisiwe kwaye sixolelwe, siphilisiwe kwaye sixolelwe.
Sonke ngoku siphakanyiselwe kuKristu. Sigcwele kwaye singqongwe luthando lwegolide lukaKristu. Sigcwalisiwe kwaye singqongwe sisibane segolide. Sikhululekile kuyo yonke iinguqu zentlungu, uloyiko kunye nomsindo we-3 ne-4th dimensions. Zonke iintambo zengqondo kunye namaqhina axhonywe kwezi zixhobo, izixhobo ezifakiweyo, izivumelwano okanye amandla embewu, ngoku ziyakhululwa kwaye ziphiliswe.
Ngoku ndicela iJamani eNgcwele ukuba idlulise kwaye ilungise kunye neFlasht Flame yam yamandla onke ethathiweyo kum kwaye ndiyibuyisele kum ngoku kwimeko yabo ecocekileyo.
Nje ukuba la mandla abuyiselwe kum, ndiqonde ukuba izitshisi zamandla zam zichitha ngokupheleleyo.
Ndiyalela i-Lord Metatron ukuba isikhulule kumakhamandela obumdaka. Ndibona ukuba itywina leDomain of Christ libekwe phezu kwam. Ndiyalela uMoya oyiNgcwele ukuba ungqine ukuba oku kuyaphunyezwa. Ikho kwaye iya kuhlala ikho!
Ngoku ndiyalela uKrestu ukuba abe nam kwaye aphilise amanxeba am kunye neenxeba. Ndiyayalela iNgilosi enkulu uMichael ukuba indimakishe ngetywina lakhe, ukuba andikhusele ngonaphakade kwiimpembelelo ezandithintela ekwenzeni ukuthanda koMdali wethu. Kwaye makube njalo!
Ndiyabulela uThixo, iiMasters ezinyukayo, iAshtar Sheran Command, iingelosi kunye neengelosi ezinkulu, nabo bonke abathathe inxaxheba kule mpiliso eqhubekayo kunye nokuphakama kwam. (Phakamisani.) Ngcwele, Ngcwele, Ngcwele, INkosi uThixo weNdalo iphela! "Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsebaioth."
Emva kokuba umthandazo ugqityiwe, kuphephe ukuhamba iyure. Phumla ngelixa ugqirha otreal at Ashtar Command asuse ngokupheleleyo ezifakwa. Ukuba ufuna ukulala, qiniseka ukuba usendleleni yokuphakama ngokomoya.
Nokuba emva komjikelo, ukucocwa kweentsuku ezingama-21 kuya kuqhubeka ukuvula iindlela ezintsha, kodwa ukuze kwenzeke oko, kufuneka ugcine iingcinga zakho kunye neemvakalelo zakho ziphakeme, kubandakanya umbulelo!